Ny kabala dia firehana mistika sy filôzôfika jiosy izay amin' ny ankapobeny tsy natao ho an' ny be sy ny maro fa miafina. Ny teny hoe kabala dia midika hoe "lovantsofina", izay manondro ny mistisisma jiosy amin' ny endriny rehetra, ka ny teôzôfia miafina indrindra izay nandroso tao Espaina tamin' ny taonjato faha-13 ka ny Sefer ha-Zohar ("Bokin' ny famirapiratana"), izay hafohezina hoe Zohar, no niteraka ny fihetsiketsehana mistika jiosy. Ny kabala dia heverin' ny mpanao azy ho "lalàna am-bava sy miafina" nomen' Andriamanitra an' i Mosesy tao amin' ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia) niaraka tamin'ny "lalàna am-bava sy an-tsoraratra ho an' ny rehetra", dia ny Torah.
Ny tanjon' ny mistisisma ara-pivavahana tamin' ny ankapobeny dia ny hidirana amin' ny "fisiana ambony" avy amin' ny fivoasana ny Baiboly amin' ny fampiasana ny fahalalana sy ny fahitana ary ny fahatsapana isankarazany. Mampiavaka ny mistika jiosy ny fitrandrahana ny hevitra sasany nandritra ny fotoana lava nivoarany. Voalohany, ny fisaintsainana ny amin' Andriamanitra velona, izay tsy azo fantarina, dia azon' ny olombelona takarina amin' ny toetra maharitra ananany. Tanjon' ny fikarohana mistika ny fahalalana ny tontolon' Andriamanitra. Ny fanaovana fivoasana ny Torah sy ny fandinihana ny fiteny hebreo no ahatongavana amin' izany. Ny Torah dia fisehoan' ny fahendren' Andriamanitra izay manana hevitra tsy hain' ny fivoasana ataon' olombelona taperina. Ny fanoavana ny didy ambara ao no ahafahana mandray anjara amin' ny fanatanterahana ny firindrana manerana izao rehetra izao. Akora nampiasaina tamin' ny famoronana ny literan' ny abidy hebreo. Ny fahalalana ny fitsipika mifehy ny fanakambanana azy no ahafahana miditra any amin' ny tontolon' Andriamanitra.
Ny teny hoe kabala dia avy amin' ny teny hebreo hoe קבלה / Qabbala izay midika hoe "lovantsofina" na "fandfraisana". Ny kabalista izany dia olona nandray (avy amin' ny teny hebreo hoe קיבל / Qibel) ny lovantsofina. Tsy manondro tenim-pinoana (na dôgma) ny teny hoe kabala fa manondro firehana ao anatin' ny jodaisma sady toe-panahy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabala&oldid=1037332"
Voaova farany tamin'ny 5 Septambra 2021 amin'ny 07:44 ity pejy ity.